Shandura Instagram email - VidaBytes | LifeBytes
Nguva zhinji isu tinogadzira social network profile ine email yatinozorega kushandisa. Dambudziko nderekuti, kana iyo social network iine iyo email chete, haungagamuchire zviziviso, uye unenge uine matambudziko ekutaurirana navo kana waida. Nechikonzero ichi, isu tiri kutarisa kunetiweki uye nekukubvunza iwe: unoziva here kuchinja Instagram email?
Zvinogona kunge wanga uchida kuziva uye kuziva pekuzviita, asi pamwe inyaya yekuti hauzive maitirwo azvo. Usanetseka, isu tiri kukubatsira izvozvi.
1 Sei uchinje Instagram email
2 Maitiro ekuchinja Instagram email kubva kuapp
3 Chinja Instagram email pakombuta
4 Chinja Instagram email pasina kuisa iyo account
Sei uchinje Instagram email
Pane zvikonzero zvakawanda nei ungade kuchinja Instagram email.. Zvingave nekuti email account yako yakabiwa, nekuti wakanganwa password yako, nekuti hausi kuishandisa ... Chaizvoizvo, chinogona kunge chiri chero chikonzero chinoita kuti uchinje pasocial network, kwete chete pa Instagram.
Dambudziko nderekuti, kupfuura patakanyoresa, vazhinji havazive kuti ndeapi matanho ekutora kuti achinje. Uye ichi ndicho chinhu chatichaedza kuchinja.
Maitiro ekuchinja Instagram email kubva kuapp
Sezvaunoziva, Instagram ikozvino inobvumidza iwe kupinda kubva kune mobile application (ndiyo iri nyore uye nekukurumidza), kana kubva pakombuta. Mukupedzisira mune zvese zvakaganhurirwa, asi ini ndichakurega uchichinje. Zvino, ngatiende nhanho nenhanho.
Hezvino iwe une mirairo yekuchinja kubva kuapp. Chii chaunofanira kuita?
Yokutanga, vhura Instagram pane yako mobile. Kana wangovhura, enda kuprofile yako. Ndapinda mukati, tsvaga iyo "Gadzirisa mbiri" sarudzo.
Kana ukateerera, email yako ichaonekwa muProfile Ruzivo. Kana ikasabuda, ipapo uchafanira kupinda Bata Sarudzo uye inofanira kuoneka ipapo.
Kana iwe ukasawana chero chinhu, wobva wadzvanya pane Personal Information Settings. Iyo email yawakanyoresa nayo account ichaonekwa ipapo. Uye chatinoda kuita kurichinja. Sei?
Dzvanya pakero yeemail. Izvi zvinokutendera kuti udzime email yawaive nayo uye woisa itsva yaunoda. Kana uchinge wava nayo, dzvanya bezel yepamusoro yekurudyi kuti ugamuchire shanduko.
Instagram inokutumira email kune yako nyowani email kuratidza kuti urikuda iyo account izvozvi, saka uchafanirwa kupa chinongedzo nekuti, kana ukasachisimbisa, hauzokwanisi kuchiwana neiyi email.
Chinja Instagram email pakombuta
Kana iwe uri mumwe weavo vanofarira kuita izvi kuburikidza nekombuta, ziva kuti unogona kuzviitawo. Uye zvakare nyore kwazvo. Muchokwadi, ndeyekutevera nhanho dzakafanana dzatakamboratidza, asi mune ino kesi kubva pakombuta. Zvichinzi:
Pinda yako Instagram account pakombuta.
Enda kune yako mbiri.
Mutsara we data uchaonekwa zvakadai sewebhusaiti, biography, zvepabonde… uye email.
Dzvanya pairi, bvisa uye wedzera itsva.
Instagram ichakutumira email kuti uone shanduko uye kana wazviita, maitiro ese anoitwa.
Chinja Instagram email pasina kuisa iyo account
Imwe yemanomano ane Instagram ndiyo mukana wekushandura email pasina kuve mukati meakaundi. Izvi zvinogona kuitika, semuenzaniso, nekuti wakarasa nharembozha yako, kana nekungoti une mamwe maakaundi uye haudi kana kusagona kushandisa iyo.
Kana zvikaitika kwauri, matanho aunofanira kutora tanga nekuvhura iyo Instagram app. Kana iwe ukatarisa, kana ichikumbira yako yekuwana data, inokupa mukana wekubatsira, pasi pebhatani repamba. Dzvanya ipapo.
Zvino, Ichakubvunza iwe email yako, nhamba yefoni, kana zita rekushandisa. ye Instagram account yaunoda kushandura iyo email.
Ichakupa sarudzo dzinoverengeka: Gamuchira email (kune account yakabatana), meseji (SMS), kana tanga neFacebook. Zvichienderana nezvaunosarudza, zvichave zvakanyanya kana zvishoma nekukurumidza.
Iwe uchawana skrini nyowani kwaunogona kuchinja password uye, pane imwe nguva, ichakuratidza iyo email yainayo. Ndipo paunofanira kudzima iyo yaunayo woisa yako, uye kana ichigonawo kuva nhamba yako yefoni.
Kana wangosimbisa zvese zvaunenge waita.
Chaizvoizvo, zvaunoita ndezvekuti Instagram inofunga kuti hauyeuke password, ndosaka uri kuita izvi, asi muchokwadi chinangwa chako ndechekuchinja iyo email pasina kuisa iyo account. Asi rinogona kuve zano rakanaka kana iwe usingakwanise kuwana account yako izvozvi uye unofanirwa kuchinja tsamba nekuchimbidza.
Iye zvino zvawaziva kushandura iyo Instagram email, kana uchinge waida, iwe unozoziva matanho aunofanira kutora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: HupenyuBytes » Tutorials » Shandura Instagram email